Momba anay - Weifang Kailong Pump Industry Co ,. Ltd.
Fitaovana hanina sy fanamboarana
Fanambarana momba ny kalitao
Weifang kailong pump industry co., LTD. Any amin'ny tanànan'ny kite tsara tarehy ao Weifang, avy amin'ny seranana Qingdao malaza eran'izao tontolo izao amin'ny fiara ihany, ao amin'io orinasa io ihany no manana tombony ara-jeografika tokana.
Izahay dia mandray ny fizotran'ny fametrahana ny siansa sol, mamokatra impeller, body pump, frame fanampiana ary kojakoja paompy hafa, ary valve, milina sakafo, fananganana fitaovana, fanodinana milina injeniera. Ny fitaovan'ny vokatra dia misy vy vy, vy karbonika, alimo ary alimo. Ny orinasa dia afaka manome serivisy fijanonana tokana avy amin'ny fampisehoana vokatra, endrika, famolavolana bobongolo, famolavolana dingana, fanodinana vokatra sns sns araka ny sary, santionany ary maodely. Ny tsingerin'ny fampandrosoana ny vokatra dia 4-8 herinandro. Ny orinasa dia manana mpiasa mihoatra ny 150, ny fahaiza-mamokatra isan-taona mihoatra ny 1200 taonina ny fametrahana mazava tsara, mihoatra ny 90% ny vokatra aondrana any Eropa, Amerika, Australia, Japan ary hafa firenena, ary efa nohamarinin'ny mpanjifa. Ny mpiasa mahay sy ny fitantanana mandroso dia miantoka ny vokatra avo lenta sy ny vidin'ny fifaninanana indrindra.
SAFIDY MANARAKA NY ALLOYS
Mampihena ny vidin'ny famokarana
CONSISTENCY an'ny mpandray anjara
SAINGAN'NY CONCEPT HANAO FANARITANA
Ny kolotsaina orinasa
Ny kolontsain'ny orinasanay dia "Precision Makes Difference". Ity hevitra ity dia mihazakazaka amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiasa, manomboka amin'ny fitantanana orinasa ka hatramin'ny famokarana vokatra, fanaraha-maso kalitao ary fanaraha-maso;
Manomboka amin'ny fanofanana ny mpiasa sy ny teknika takiana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, dia manohy mikirakira fanapahan-kevitra izahay, izay mampiavaka antsika amin'ny hafa. Izahay dia mikendry ny hanamora kokoa ny mpanjifa mividy vokatra kalitao avy amina mpanamboatra azo itokisana izay nandalo ny ISO9001, ary azonay antoka fa ho hitanao fa mendrika ny hisafidianana anay ho mpamatsy anao.
Azafady mifandraisa aminay ary ampahafantaro anay ny fomba ahafahanay manompo anao.
ADDRESSNo.6698 Weizhou South Road, Distrikan'i Fangzi, Weifang City, Faritanin'i Shandong.
Impeller paompy vy, Tranom-paompy, Impeller paompy, Casting Impeller paompy, Impeller Pump Pump Centrifugal, Masinina singa,